Mpanamboatra sy mpamatsy PES - Factory PES China
HD112 dia vokatra vita amin'ny polyester. Ity modely ity dia azo vita amin'ny taratasy na tsy misy taratasy. Matetika izy io dia matetika ampiasaina amin'ny fantsona aluminium na tontonana. Ataontsika mahazatra ny sakany amin'ny 1m, ny sakany hafa dia tokony hamboarina. Betsaka ny karazana fampiharana an'io famaritana io. HD112 dia ampiasaina ...
Sarimihetsika fametahana hafanana PES
Izy io dia novaina fitaovana vita amin'ny polyester vita amin'ny taratasy navoaka. Izy io dia manana faritra mitsonika avy amin'ny 47-70 ℃, ny sakany 1m izay mety amin'ny fitaovana kiraro, akanjo, fitaovana haingon-trano Automotive, lamba lamba an-trano sy sehatra hafa, toy ny badge embroidery. Ity dia compolymer fitaovana vaovao izay ambany ba ...
Ity famaritana ity dia mitovy amin'ny 114B. Ny maha samy hafa azy dia samy manana ny indoson'ny dilting sy ny elanelam-pandehanana. Ity dia manana temprature mitsonika avo kokoa. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny maodely mifanaraka amin'ny filan'izy ireo manokana sy ny karazany sy ny kalitaon'ny lamba. Ankoatr'izay, afaka ...